मलाई गाडी देख्नै सत्र वर्ष लाग्योः दयाहाङ राई - Everest Talk
मलाई गाडी देख्नै सत्र वर्ष लाग्योः दयाहाङ राई1 min read
हामीले हाम्रा सपनाहरू खोज्नुपर्छ, यो संसारमा खोजियो भने भेटाउन असम्भव केही छैन । तर, मान्छेमा धैर्यताको आवश्यकताचाहिँ पर्दछ ।
२०७६, ९ मंसिर सोमबार १०:२४
in मनोरन्जन, मुख्य समाचार, युवा
पोखराले हरकोहीलाई लोभ्याउँछ । चाहे स्वदेशी होस् वा विदेशी । चाहे बालक, तन्नेरी वा प्रौढ । पोखराको काखमा लुट्पुटिन जोकोही उत्साहित बन्छन् । जेठ १६ गते युवाहरूलाई पोखराले निम्तो दियो, युथ इन एक्सनको हात समाएर आउनुभन्दै । यही निम्तोलाई आधार मानेर देशभरबाट “द आर्ट अफ लिभिङ”को नेतृत्वमा भएको युथ इन एक्सन कार्यक्रममा हजारभन्दा बढी युवाले सहभागिता जनाए । जीवनमा पहिलोपटक हिमालमा बस्नेले तराईको मान्छे देख्यो । तराईमा बस्ने मान्छेले हिमालमा बस्नेको अनुहार छाम्यो । यो दृश्यले नेपाली हुनुको अर्थमा प्रतिनिधित्व गरिरहेको थियो ।
जम्मा तीन दिन चलेको कार्यक्रमले मान्छेमा नयाँ उत्साह थप्यो । जोस र जाँगरले मान्छेको हृदय भरियो ।
युवाहरूको हृदयमा रित्तोपना थियो । बाटो आँखैअगाडि भए पनि कहाँ जाने अन्योलमा रहेका युवालाई युथ इन एक्सनले बाटो देखाइदियो ।
अन्तिम दिनः नेपाली चलचित्र जगतमा आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाएका दयाहाङ राईको उपस्थितिले कार्यक्रमको रौनक चुल्यायो । ताली एकनासले बजिरहेको थियो । माइक समाएपछि पुनः ताली बज्यो ।
दयाहाङको मुहारका लागि हाँसो पाहुना होइन बरु भर्खर जन्मिएको बच्चाझैँ हो, जो आमाको साथमा हरबखत रहन्छ । चलचित्रले दिएको भूमिकामा होस् वा बाहिर, दयाहाङलाई भेट्दा मान्छे साँच्चै अलमलमा रहन्छ । यो सोच्न बाध्य हुन्छ– यो मान्छेले यस्तो भूमिका कसरी निभायो ?
बिना योजना “युथ इन एक्सन”को कार्यक्रममा पुगेका दयाहाङले माइक र उपस्थित युवाको जम्मा पन्ध्र मिनेट समय लिए । त्यो पन्ध्र मिनेट उनले आफ्नो विचार र जीवनले सुम्पिएका भूमिकाहरूको कथा सुनाए । सायद ती हजार युवामा एक जनाले त पक्कै दयाहाङ निस्कने ढोकामा पुग्नुअगावै सोच बनाए होला– “मेरो बाटो पनि यही हो, मेरो बाटो त्यो होइन ।” कोही न कोहीले त यस्तै सोच्यो पक्कै ।
दयाहाङ भन्छन्– “हामीमा पढ्नुपर्छ भन्ने चेतना सात साल पछाडिबाट मात्र आएको हो । त्योभन्दा अगाडि पढ्ने रहर त थियो तर पढ्न नपाउनुका कारणहरू पनि त्यही अनुरूप नै थिए ।”
पढ्नुपर्छ भन्ने चेतना दयाहाङको परिवारमा वा भनौँ बाआमालाई पनि थियो । पढ्नु त पर्छ, तर के पढ्ने ? न बा–आमालाई थाहा थियो न उनलाई नै । उनको बाल्यकाल विशेषत गोठालो बनेर नै बितेको थियो ।
उनी अहिले नेपाली चलचित्रका अनमोल रत्न हुन् । यही कुरालाई सम्झदै उनी भन्छन्– “म आज जहाँ छु, जे छु, जस्तो छु र जसरी छु; यी कुरा मैले बाल्यकालमा देखिने सपनाहरूलाई पछ्याएर आएको होइन । म, आफू के हुँ ? भन्ने कुरा आफैँ खोजेर यहाँसम्म आएको हुँ ।” (तालीको आवाजले हल गुञ्जन्छ)
दयाहाङ सपना देख्ने होइन कि खोज्नुपर्छ भन्ने कुरालाई जोड दिन्छन् । उनी पुनः थप्छन्– “हामीले हाम्रा सपनाहरू खोज्नुपर्छ, यो संसारमा खोजियो भने भेटाउन असम्भव केही छैन । तर, मान्छेमा धैर्यताको आवश्यकताचाहिँ पर्दछ ।”
जीवन सिक्का हो । सुख र दुःख भनेका एकै सिक्काका दुई पाटा । यही कुरालाई जोडेर दयाहाङ माइकको टाउको बर्टादै मुसुक्क मुस्काराएर भन्छन्– “दुःख सुखको लागि ढोका हो । दुःख आयो भन्दैमा निरास नहुनु, बरु खुसी भइदिनु । किनकि दुःखपछि मात्र सुखको पालो हो । यो संसार घुम्छ भन्छन्, मलाई पनि होझैँ लाग्छ । कुनै न कुनै समय त घुमेर तपाईँको पक्षमा आइपुग्छ, आइपुग्छ । सत्य हो ।”
जीवनलाई एकदम नजिकबाट नियालेका दयाहाङको भनाइ छ कि जीवन भनेको चक्र हो । अहिले सुख छ भने जीवनको एक कालखण्डमा तपाईँको लागि केही मात्रामा भएपनि दुःख त छ ।
दयाहाङले विद्यालय र कलेजको अध्ययन भोजपुरमा नै सकेका हुन् । रोचक कुरा त के छ भने उनले चलचित्र, नक्सा वा भनौँ टिभीको पर्दाभन्दा बाहिरको दुनियाँमा गाडी देख्न साडे सत्र वर्ष कुर्नुपर्यो । दयाले आफ्नो सत्र वसन्तपछि मात्र प्रत्यक्ष रूपमा गाडी देखेका हुन् ।
उनको फुपूको घर झापाको दमकमा थियो । फुपूको घर आए । त्यही समयमा नै उनले पहिलो पटक गाडी देखे ।
जीवनमा पाएको असफलता, दुःख, पीर र जीवन भोगाइलाई उनले आफ्नै तरिकाले बुझेका छन् । उनलाई लाग्छ कि आफ्नो जीवनभोगाइ भनेको आफ्नो सम्पत्ती हो । आफ्नो भोगाइ अरू कोहीसँग पनि हुँदैन । दयाहाङको यो आफ्नै विचार हो । उनलाई लाग्छ, “यो संसारमा मान्छे जति धन–सम्पत्ती भन्दै दौडिरहेको छ । यो सबै लोभ हो ।”
दयाहाङलाई काठमाडौँ छिर्दा, मैले नाटक नै खेल्नुपर्छ वा चलचित्र नै खेल्नुपर्छ भन्ने थिएन । उनलाई अन्तर्वार्तामा अत्याधिक सोधिन्छ, “यदि तपाईँ अभिनेता नभएको भए के बन्नुहुन्थ्यो ?” उनको सधैँ एउटै जवाफ हुन्छ, “सायद म शिक्षक बन्ने थिएँ ।”
उनलाई शिक्षक असल हुन्छन् जस्तो लाग्छ । उनको गाउँमा फर्केर हेर्ने हो भने गाउँभरमा शिक्षकमात्र असल थिए । सायद असल बन्ने इच्छाले उनलाई शिक्षण पेसाले आकर्षित गरेको हुनसक्छ ।
दयाहाङ सम्झन्छन्, उनलाई अभिनेताको आर्कषण न्यून नै भए पनि तयारी भने बाल्यकालबाट नै थियो । उनी पत्रिकाहरू पढ्ने गर्थेँ । त्यहाँ कवि, नाच्ने मान्छे, हिरोहरूको अन्तर्वार्ता हुन्थ्यो र त्यो विषयमा उनलाई चासो पर्नेगथ्र्यो । “त्योबेला नै ममा अभिनेताको भोक जागेको रहेछ ।”
उनी बाल्यकालमा चोर-पुलिस खेल खेल्ने गर्थे । उनलाई पुलिसभन्दा पनि चोर बन्न मन लाग्थ्यो । चोरले गर्नुपर्ने क्रियाकलापमा उनले कुनै सफल अभिनेताले झैँ भूमिका निर्वाह गर्थे ।
दयाहाङको बाल्यकालमा साथी धेरै थिएनन् । उनको हरबखत साथ रहने साथी भनेकै खुकुरी थियो । खुकुरीले पनि उनलाई जीवन सिकाएको छ । खुकुरीको साथ लिएर उनले लौरो बनाए, त्यो लौरो गोरु तर्साउन काम लाग्यो । त्यसपछि उनले अर्को लौरो बनाए, त्यही लौरो उनलाई जमिनमा टेक्न सिकायो । त्यही लौरो र खुकुरीसँगको अभ्यासले उनलाई आर्ट सिकायो भन्ने उनको मान्यता छ ।
दयाहाङलाई बाँसका सबै काम आउँछ । चोया बनाउन, डोको बुन्न । उनी आफ्नो अतीतमा पुगेर माइकलाई जोडले समाउँछन् र भन्छन्– “मैले मेरो खर्च डोको बुनेर नै पुर्याउथेँ ।” (पुनः तालीले हल गुञ्जायमान बन्छ)
आफ्नो कामलाई सम्मान गर्नुपर्छ । आफूले गरेको कामलाई सम्मान गरियो भनेमात्र उक्त कामले आफूलाई पनि सम्मान गर्छ । यही कुरामा जोड्दै उनी भन्छन्– “अहिले हाम्रा बालबच्चालाई हामी बढी नम्बर कसरी ल्याउने भन्ने कुरामा जोड दिइरहेका छौँ । तर नम्बरमा मात्र ज्ञान हुँदैन । यो मेरो भोगाइ हो ।”
दयाहाङलाई परीक्षासँग औधी डर लाग्छ । अर्थात् उनलाई फेल भन्ने कुरासँग डर लाग्छ । तर उनी भन्छन्– “फेल वा असफल हुनु भनेको सफलताको बाटो देखिनु हो । असफलताले नै मान्छेलाई सफल बनाउँछ ।”
उनी अगाडिका कुरा बोल्दैनन्, जे बोल्छन् आफ्नो जीवनको पछाडिको भागलाई हेरेर बोल्छन् । भन्छन्– “तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँबाट पछाडि फर्केर हेर्नूस्, सफलताको बाटो भएर नै तपाईँ यहाँसम्म आइपुग्नु भएको हो । तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्थ्यो, अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ ? त्यो नै तपाईँको सफलता हो । हामी सबै नै सफल हौँ । असफल भन्ने कुरा त हुँदै हुँदैन ।”
दयाहाङको अधिकांश आफन्त लाहुरे छन् । यही विषयमा अन्तर्वार्ता लिनेले सोध्ने गरेका छन् कि तपाईँलाई लाहुरे बन्ने मोह पलाएन ? उनी मुस्कुराउँदै जवाफ दिन्छन्, “मोह पलाएको भए म यहाँ हुने नै थिइनँ ।”
जीवनलाई नजिकबाट हेर्दै जीवनको कालखण्डमा हिँडिरहेका दयाहाङले धेरै जसो जीवन भोगेका छन् । उनको सफलता नै उनको जीवन भोगाइ हो ।
उनी हिँड्ने बेलामा पछाडिबाट एउटा डाइलग भन्नूस् भन्दै अनुरोध गरियो । उनले भने– “मैले डाइलगभन्दा आफैँलाई अपमान गरेजस्तो हुन्छ । माफ गर्नुहोला, म डाइलग भन्न सक्दिनँ ।”
उनी करिब पन्ध्र मिनेट बोल्दा उनीबाट धेरै कुरा सिकियो । उनले एउटा जीवन सिकाएर गए । जसरी तालीले उनलाई स्वागत गरिएको थियो उसैगरी तालीले नै बिदाइ गरियो ।
Tags: द आर्ट अफ लिभिङदयाहाङ राईनिरज दाहाल